Kiraa DOZARA | | Awash Tenders
West Hararge Zone Guba Korcha Wereda Finance and Economic Development Bureau
Godina Harargee Lixaa Waajjirri Maallaqaa fi Walta’iinsa Diinagdee Aanaa Gubbaa Qorichaa Baajeta Idilee Bara baajetaa 2013 Hojii projekti Daandi Aanichaatiif qabameen Hojii Daandii Hardiimii Hanga Siree Saaddoo Hojjachuu waan barabaaduuf DOZARA CAT D8R 140 HP Moodela 2014 fi isaa ol kan ta’e Caalbaasii ifaa Kallacha Oromiyaatiin Waldorgomsiisee kireeffachuu waan barbaaduuf Dorgomtootni Ulaagaalee kanaa gadii guuttan hundi akka irratti Hirmaattan afeeramtaniittu.
1. Heeyyama bara 2012 kan haarawoomse, Gibira Mootummaa kan kaffalee fi Waraqaa qulqullinaa dhiyeefachuu kan danda’u.
2. Galmaa’oo VAT Kan ta’ee fi Ragaa dhiyeeffachuu kan dan da’u.
3. Hayyama Gosa hojii kiraa Maashinii kan qabuu fi Ragaa dhiyeefachuu kan danda’u.
4. Galmee dhiyeesitoota Waajjira Maallaqaa fi Walta’iinsa Dinagdee Oromiyaa irratti kan gal maa’e fi Ragaa dhiyefachuu kan danda’u.
5. Dorgomtoota Buleeyyii kan ta’an Waraqaa qul-qullinaa Waajjira Abbaa taayitaa Gali irraa kennameef dhiyee fachuu qaba.
6. Dorgomtootni Hundinuu Qaama seerummaa Waajjira Carraa Hoji Uumuu (CHU) Irraa kenameef dhiyeefachuu kan danda’u.
7. Dorgomtoomi Caalbaasichaa hundinuu Sanada Caalbaasichaa guutachuun Urjinaala Teknikaala fi Faayneenshiyaalaa Kophaa kophaan erga qopheese booda poostaa tokkoon samsuun galchuu qaba.Akkasumaas kophii Teknikaalatii fi Faayneenshiyaala Kophaa Kophaan erga qopheese Poostaa tokkoon Samsuudhaan galchuu qaba.
8. Dorgomtootni hundinuu Kabachiisa Caalbaasichaatiif kan oolu CPO Baankiidhaan mirkannaa’e kan maqaa Waajjira Maallaqaa fi Wal-ta’iinsa Dinagdee Aanaa Gubbaa qorichaatin qophaa’e Qar.10,000 Sanada urjinaala teeknikaalatiin Wal-qabsiisee dhiyeessuu qaba .
9. Beeksifni Caalbaasiin Kun guyyaa Gaazexaa Kallacha Oromiyaa irratti maxxanfamee bahe irraa eegalee Waliti fufiinsaan guyyuma kana sa’aatii 8:00 irratti bakka dorgomaan ykn bakka bu’aan seeraa jirutti kan banamu ta’a. Dorgomaan ykn bakka bu’aan seeraa jiraachuu baatus banamuu Caalbaasichaa hin gufachiisu.
10. Guyyaan baniinsa Caalbaasichaa guyyaa Ayyaanaa irra gara guyyaa itti aanutti kan darbu ta’a.
11. Dorgomaan Moo’ataa Caalbaasicha kanaa ta’e Gatii geejiba maashinicha moo’atee gatii korsiisuu fi buusuu mataa ofiitin uwwisee dhiyeesuu qaba.
12. Dorgomtootni hundinuu Sanada Caalbaasii kanaaf qophaa’e Guyyaa Caalbaasiin kun Gaazixaa Kallacha Oromiyaatin bahe irraa eegaltanii Waajjira MWD Aanaa gubbaa qorichaa dhufuudhaan qarshii hin deebine 50 (Shantama qofa) Kaffaluun fudhachuu nidandeesu.
13. Iddoon argama keenyaa finfinnee irraa gara bahaatti 279 KM irratti argamna.
14. Waajirri Carraa biraa yoo argate Caalbaasicha gar-tokkeenis ta’ee guutummaan guututti haquuf mirga ni qaba. Waajjira MWD Aa/Gub/Qorichaa.Odeefannoo Dabalataatif Lakk bilbilaa 0254510060 0913540043/0910035632/093332431901 Gabateen Kun Guutamuu qaba
ዋጋ ከ VAT ዉጭ በሰዐት
2014 FI Isaa ol
Hubachiisa Gabatee lakk. 01
1. Gabateen kun of eegannon guutamuu qaba Haqaa fi laaqaa qabaatee kan hin dubifamne yoota’e Fudhatama hinqabu (Dorgomiin ala ta’a.)
2. Tokkoon tokkoo bakka duwwaa gabatee gubbaa irrati argamuu haala ifa ta’een akka nama hundaa galuti guutamuu qaba.::
3. Fageenyi Teesson teenya Finfinnee irraa qabdu Daandii Spaaltii 252KM fi Kan cirrachaa 27 Walii gala 279KM irrati argamna.
4. Dorgomtootni Gatii dorgomii yeroo guutattan VAT irrati dabaluu akka hin daganne.Cimsinee isin hubachiifna. Waajjirri Maallaqaa fi Dinagdee Aanaa Gubbaa Qorichaa